Iqokelwe imiklomelo emithathu imbongi esencane | News24
Imbongi yase Sweetwaters u-Avela Khawula.PHOTO:supplied
IMBONGI yase Sweetwaters u-Avela Khawula (23) isikuphindile futhi lokho njengoba isethubeni lokuhlomula ngemiklomelo emithathu kuma-awadi ahlukahlukene.
UKhawula uqokwe kuma KZN Poetry Awards ngaphansi komkhakha we Most Special poet, kuma KZN Capital Maskandi Awards kwi-Best Poet kanye nakuma KZN young achievers awards kwi-Best poet.
Ezwakalisa injabulo yakhe uKhawula uthe lokhu kukhombisa ukuthi umsebenzi wakhe uqhubekela phambili.
“Ngicabanga ukuthi ukuwina kwami i-awadi kuMngeni Music Awards ngonyaka owedlule kungivulele amathuba amaningi kakhulu. Ngiyafisa ukuthi abalandeli bami baqhubeke futhi nokungeseka ngibuye nawo womathathu alama-awadi.”
UKhawula ungene emkhakheni wokuhaya izinkondlo ngonyaka ka 2009 ngesikhathi esafunda esikoleni samabanga aphezulu uMsimunde. Uthe ukholelwa ekusebenziseni ithalente lakhe ukukhuluma ngezinto ezithinta umphakathi kanye namaqiniso afihlakele.
“Ngiqale ukugxila kakhulu ekuhayeni izinkondlo kade ngenza uGrade 10. Isikole sami sasinomcimbi wokuvala unyaka sacelwa ukuthi sibhale izinkondlo, eyami yayincoma umsebenzi wothisha futhi yathakaselwa abantu abaningi.”
UKhawula useke wazwakala nasemsakazweni uKhozi FM ohlelweni iBack to My Roots kanti kumanje umatasatasa uvakashela izikole njengengxenye yohlelo lwe-Poetry Live Tour ehambela izikole igqugquzela intsha.
“Sibagqugquzela ukuthi bangahlali phezu kwamathalente abo kodwa basukume bawasebenzise ukushintsha izimpilo zabo. Siphinde sibameme ukuthi babe yingxenye yemicimbi esisuke siyihlelile emiphakathini eyahlukene.
Ukhawula usehaye izinkondlo zakhe ezindaweni ezahlukene okuhlanganisa kwi-Durban Tourism Indaba, ekhonsathini loKhozi FM laminyaka yonke kanye nakwifestivali yasebhishi ye-Motsepe Foundation.
Uthe phakathi kwabantu abamgqugquzelayo kulomkhakha izimbongi zakhona eMgungundlovu okuhlanganisa uGolide, Syabonga Mpungose kanye noBongeka Zuma.
Ngaphandle nje kokugaqela lemiklomelo uKhawula ngoNovemba nyakenye ubemenywe igatsha lentsha kwi-Southern African Development Community ukuba azohaya izinkondlo kwinkomfa yabo eBotswana.
Lembongi iphinde yaphatha imicimbi emikhulu efana ne-Impi annual event eNtulo Lounge khona eSweetwaters.
“Ngokuthola ukwesekwa ngiyethemba ukuthi ngizobuya nazo zonke lezindondo kulemikhakha engiqokwe kuyo.”
Ukuvotela uKhawula kuma KZN Capital Maskandi Awards azoba ngoJuni ungathumela i-SMS ku 45633, i-SMS ngayinye ibiza uR1.50.